Killing of Cecil the lion spurs Zimbabwe to boost wildlife protection - The Orange County Register
A lion named Tommy walks through scorched grass towards shade near a spot Cecil the lion was lured onto a farm in an alleged illegal hunt in Hwange about 700 kilometres south west of Harare, Zimbabwe, Thursday, Aug. 6. Cecil had to cross only a set of railroad tracks to go from a protected area to a kill zone. The killing of Cecil by an American hunter triggered outrage far beyond Zimbabwes boarders and has strengthened resolve to enforce regulations governing hunting. TSVANGIRAYI MUKWAZHI , THE ASSOCIATED PRESS 1 of 8
Giraffes drink water from a water point near where Cecil the lion crossed when he was lured onto a farm in an alleged illegal hunt in Hwange about 700 kilometres south west of Harare, Zimbabwe, Thursday, Aug. 6. Cecil had to cross only a set of railroad tracks to go from a protected area to a kill zone. The killing the Lion by an American hunter triggered outrage far beyond Zimbabwes borders and has strengthened resolve to enforce regulations governing hunting. TSVANGIRAYI MUKWAZHI , THE ASSOCIATED PRESS 1 of 8
File: In this Thursday, Aug. 6, file photo a giraffe makes it's way though the bush near where Cecil the lion crossed when he was lured onto a farm in an alleged illegal hunt in Hwange about 700 kilometres south west of Harare, Zimbabwe. Cecil had to cross only a set of railroad tracks to go from a protected area to a kill zone. The killing of the Lion by an American hunter triggered outrage far beyond Zimbabwes borders and has strengthened resolve to enforce regulations governing hunting. TSVANGIRAYI MUKWAZHI , THE ASSOCIATED PRESS 1 of 8
Lion researcher, Brent Staplekamp, holds an antenna while standing on the tracks that Cecil the lion crossed when he was lured onto a farm in an alleged illegal hunt in Hwange about 700 kilometres south west of Harare, Zimbabwe, Thursday, Aug. 6. Cecil had to cross only a set of railroad tracks to go from a protected area to a kill zone. The killing of Cecil by an American hunter triggered outrage far beyond Zimbabwes boarders and has strengthened resolve to enforce regulations governing hunting. TSVANGIRAYI MUKWAZHI , THE ASSOCIATED PRESS 1 of 8
Lion researcher, Brent Staplekamp, holds an antenna while standing near the tracks that Cecil the lion crossed when he was lured onto a farm in an alleged illegal hunt in Hwange about 700 kilometres south west of Harare, Zimbabwe, Thursday, Aug. 6. Cecil had to cross only a set of railroad tracks to go from a protected area to a kill zone. The killing of Cecil by an American hunter triggered outrage far beyond Zimbabwes boarders and has strengthened resolve to enforce regulations governing hunting. TSVANGIRAYI MUKWAZHI , THE ASSOCIATED PRESS 1 of 8
Elephants roam freely near the railway track that Cecil the lion crossed when he was lured onto a farm in an alleged illegal hunt in Hwange about 700 kilometres south west of Harare, Zimbabwe, Thursday, Aug. 6. Cecil had to cross only a set of railroad tracks to go from a protected area to a kill zone. The killing of Cecil by an American hunter triggered outrage far beyond Zimbabwes boarders and has strengthened resolve to enforce regulations governing hunting. TSVANGIRAYI MUKWAZHI , THE ASSOCIATED PRESS 1 of 8
A lion named Tommy walks through scorched grass towards shade near a spot Cecil the lion was lured onto a farm in an alleged illegal hunt in Hwange about 700 kilometres south west of Harare, Zimbabwe, Thursday, Aug. 6. Cecil had to cross only a set of railroad tracks to go from a protected area to a kill zone. The killing of Cecil by an American hunter triggered outrage far beyond Zimbabwes boarders and has strengthened resolve to enforce regulations governing hunting. TSVANGIRAYI MUKWAZHI , THE ASSOCIATED PRESS View slideshow
A lion named Tommy walks through scorched grass towards shade near a spot Cecil the lion was lured onto a farm in an alleged illegal hunt in Hwange about 700 kilometres south west of Harare, Zimbabwe, Thursday, Aug. 6. Cecil had to cross only a set of railroad tracks to go from a protected area to a kill zone. The killing of Cecil by an American hunter triggered outrage far beyond Zimbabwes boarders and has strengthened resolve to enforce regulations governing hunting. TSVANGIRAYI MUKWAZHI , THE ASSOCIATED PRESS BY FARAI MUTSAKA / THE ASSOCIATED PRESS Facebook
Gesturing at the vast sun-splashed grasslands and woodlands on the private-land side of the railroad tracks, Stapelkamp said: “This land stays as a wildlife habitat because of the money that hunting brings.” Digital & Driveway Delivery - 50% Off	Most Popular